Goku ၏စာပိုဒ်တို 40 | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Goku တွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်တိုများ (40)
ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးတွင်သန်းနှင့်ချီသောလူများသည် Dragon Ball အကြောင်းနှင့်ထပ်တူထပ်ခါတလဲလဲမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပြီး Goku သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုသင်သိနိုင်သည်။ သင်စီးရီးကိုမတွေ့ဖူးသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည်မှာဇာတ်ကောင် anime မှဒဏ္myာရီဆန်သောကြောင့် Goku သည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုသင်သိသည်။ Akira Toriyama ကိုသင်အပြည့်အဝမသိလျှင်ပင် Anime ဖန်တီးရှင်ပင်သင်၏ခေါင်း၌ပဲ့တင်ထပ်နေနိုင်သည်။
နောက်ပြီးသင်ကစီးရီးတွင်ပါသော Goku ၏ဒဏ္myာရီပုံပြင်များအချို့ကိုပြလိမ့်မည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါက anime စီးရီးဖြစ်တာအပြင်ရုန်းကန်ခြင်း၊ ဇွဲရှိခြင်း၊ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ မိသားစု၊ ချစ်ခြင်းစတဲ့တန်ဖိုးတွေကိုထုတ်လွှင့်လို့ပါ။
ဘ ၀ ၌စစ်တိုက်စေမည့် Goku စာပိုဒ်တိုများ
အောက်တွင်သင်သိရှိရမည့်စကားစုများ၊ အကယ်၍ သင်ယခင်ကမသိခဲ့ပါကယခုမှ စ၍ ၎င်းတို့ကိုသင့်အားဘဝတွင်ရှေ့သို့ချီတက်ရန်လုံလောက်သောလှုံ့ဆော်မှုပေးသောကြောင့်သူတို့ကိုရေးမှတ်။ ဖတ်ပြနိုင်သည်။
မင်းရောငါရောပါတခြားသူတွေပါဘဝဘ ၀ ကိုခက်ခက်ခဲခဲမထိခိုက်ပါဘူး။ သင်မည်မျှပင်ကြိုးစားလုပ်ဆောင်သည်ကိုအရေးမကြီးပါ။ သင်မည်မျှပင်ခုခံတွန်းလှန်သည်အရေးကြီးသည်။
ငါကျေနပ်နေပြီ မင်းရဲ့မာနကိုချိုးဖျက်ပစ်လိုက်ပြီ၊ မင်းထက်သာလွန်တဲ့သူရဲကောင်းတစ်ယောက်ကိုသင်စိန်ခေါ်ပြီးရှုံးနိမ့်ခဲ့တယ်၊ အဆိုးဆုံးကတော့သူဟာမျောက်တစ်ကောင်ပဲ။
ထိခိုက်မှုတစ်ခုစီတိုင်းနှင့်သင်၏စွမ်းအင်ပမာဏလျော့ကျသွားသည်၊ အမှန်မှာ၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါ။ မင်းကိုဆက်ပြီးတိုက်ခိုက်တာဟာမမျှတဘူး
သင်နှင့်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ရန်အကြောင်းမရှိပါ၊ သင်အလွန်ကြောက်ရွံ့ပြီးရှက်ရွံ့နေမည်။ ထိုကြောက်ရွံ့မှုနှင့်အတူနေထိုင်ပါ။ သူ့ကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေခိုင်းပါ။ Goodbye Freeza, မကောင်းမှုကိုဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနှင့်၊ ကျန်ရှိသောသင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ပါစေ။
သင်ကမ္ဘာဂြိုဟ်၌ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်ကြောက်မက်ဖွယ်ရာများအတွက်တာဝန်ရှိသည့် Freeza ဖြစ်ရမည်။ Vegeta နှင့်သင်ကြုံတွေ့ရနိုင်သည့်ပြtheနာများအားလုံး၊ ကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
နှုတ်ဆက်ပါတယ်၊ Vegeto၊ မင်းထင်ထားသလိုရက်စက်မှုမရှိဘူး။ ကျောက်နှလုံးသားရှိသူတစ် ဦး သည်သင်ကဲ့သို့မျက်ရည်မကျပါ။ သင်သည်သင်၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးသူတို့နှင့်အတူပါခဲ့ရပေမည်။
ဟုတ်တယ်၊ Vegeta မှန်တယ်၊ မင်းမှာဂုဏ်မရှိဘူး။ မင်းနဲ့မင်းသေခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ငါမင်းကိုငါအနိုင်ယူသွားမယ်။
Chi-Chi သည် Gohan သို့ရောက်လာသောအခါအကာအကွယ်မဲ့နိုင်သည်။ သူကသူ့ကိုတစ်နေကုန်လေ့လာစေပြီးကိုယ်ခံပညာသည်အချိန်ဖြုန်းတီးကြောင်းပြောပြသည်။
ကျွန်မတို့ရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှုတွေကိုတစ်ချိန်ကဘေးဖယ်ထားပြီးအတူတကွအလုပ်လုပ်မယ်လို့ကျွန်မထင်ခဲ့တယ်! ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းဖော်များ၊ မိသားစုနှင့် Vegeta သူငယ်ချင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ကြွေးတင်နေသည်။
သငျသညျ Saiyajin ပြိုင်ပွဲနှင့်ငါတို့လူမျိုး၏နောက်ဆုံးဖြစ်ကြ၏အကြောင်းကိုအစဉ်အမြဲပြောခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာပြိုင်ပွဲအသစ်ကိုစတင်နေပြီဆိုတာကိုလက်ခံဖို့အချိန်တန်ပါပြီ
သင်သည်အခြားသူများ၏ဝေဒနာခံစားရခြင်းကိုကြည့်ရတာပျော်နေပုံရသည်။ ဘ ၀ ဟာတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့မင်းထင်တယ် မင်းကအိမ်တွေကိုဖျက်ဆီးတယ်၊ မင်းကငြိမ်းချမ်းရေးကိုချစ်မြတ်နိုးတဲ့အပြစ်မဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကိုယူဆောင်လာတယ်။ မင်းရဲ့ကလေးဖျော်ဖြေမှုအတွက်ကလေးတွေကိုတောင်သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သင့်အလှည့်
Vegeta နားထောင်ပါ မင်း Majin Buu ကိုမင်းတစ်ယောက်တည်းမတိုက်နိုင်ဘူး။ လုပ်ရန်တစ်ခုတည်းရှိသည်။ မင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်စိတ်ဆိုးရတာလဲငါမသိဘူးဒါပေမယ့်ငါတို့အချိန်ကကုန်နေပြီ။ သငျသညျ Vegeta ပေါင်းစပ်လုပ်ဖို့ရှိသည်!
အဘယ်အရာကိုရယ်စရာဖြစ်ပါသည်သတ္တဝါလေးစားမှုအတွက်မယုံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မလုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာအချို့နှင့်နားလည်ထားသောအရာအချို့ရှိပါသည်။ ယောက်ျား၏မိသားစုနှင့်သင်မဆက်သွယ်သင့်ပါ။
လွယ်လွယ်လေးယူပါ၊ ငါပြောဖို့လာလာတာ။ ငါသိချင်တယ်။ ငါတို့က Freeza လိုလူတွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ကငါတို့ကိုအခွင့်အရေးမပေးနိုင်ဘူးလို့ Whis ပြောခဲ့တာကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ။ ကျနော်တို့အတူတကွတိုက်ခိုက်နေလေ့ကျင့်သင့်သလဲ အမှု၌ငါတို့ကလိုအပ်ပါတယ်?
အဲဒါကို Krillin မလုပ်ပါနဲ့ ငါတရားမျှတမှုနဲ့တူပုံရသည်ကိုသိပေမယ့်မမှားပါဘူး သူ့ကိုသတ်လျှင်ငါတို့ထက် သာ၍ ကောင်းမြတ်သည်ဟုငါပြ၏။ သူတို့အနိုင်ရတယ်ဆိုတာပြလိမ့်မယ်။ သူက Krillin ပါ။ သူလို Saiyan တစ်ယောက်ပါ။
ဟေ့ Gohan စိတ်မပူပါနဲ့ ငါကမ်ာဘကိုပြန်မသွားဘူး။ အရမ်းကိုရိုးရှင်းပါတယ်၊ သင်လုပ်နိုင်တာ။ မင်းရဲ့ချစ်သူ Videl ကိုအဲဒီလိုလုပ်ဖို့သင်ပြောနိုင်သလား။
ငါမယုံနိုင်ဘူး၊ ငါဟာတခြားကမ္ဘာမှာတကယ်လေ့ကျင့်သင်ကြားခဲ့တယ်လို့ထင်ပေမယ့်ငါမှားခဲ့တယ် ငါနဲ့ခွန်အားတူတဲ့သူတစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတာငါမထင်ခဲ့ဘူး။
မင်းဘယ်မှာပဲနေနေမင်းရဲ့ Ki ကိုအမြဲတမ်းခံစားနေမှာပါ။
နှိမ့်ချခြင်း - လူသား၏တန်ဖိုးအရှိဆုံးတန်ဖိုးသာမကရှားပါးဆုံးဖြစ်သည်။
Piccolo လိုတစ်ယောက်ယောက်ပြောင်းနိုင်ရင်ဘယ်သူ့ကိုမှပြောင်းလို့ရမယ်။ Vegeta သည်အလားတူအခွင့်အရေးမျိုးရရှိရန်ထိုက်တန်သည်။ မြေကြီးပေါ်ရှိလူများကိုသနားကြင်နာကြောင်းပြပါကသူလည်း၎င်းကိုသင်ယူနိုင်သည်။
Gohan Piccolo ကိုယူပြီးကမ္ဘာကိုပြန်သွားပါ။ သူသည်အသက်ရှင်သေးသည်၊ ယခုငါသည်းခံခြင်းအနည်းငယ်ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » Goku တွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်တိုများ (40)
ဝါကျ ၈ ကိုဘယ်အချိန်မှာအခန်း (အခန်း) မှာပြောခဲ့သလဲ။